Maxay ka dhigan tahay tallaabada uu madaxwayne Farmaajo ku celiyay jinsiyadda Mareykanka? - BBC News Somali
Image caption Madaxwayne Farmaajo
War saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in jinsiyaddii labaad ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka qaatay dalka Mareykanka uu dib isaga celiyay.
Waxaa sidoo kale warqadda lagu xusay in howshan ay in muddo ku howlanaayeen sharciyaqaanno iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha Soomaaliya iyo Mareykanka.
Inkastoo uu dastuurka Somaaliya uu fasaxayo in qofka uu haysan karo labo jinsayadood ayaa hadana waxaa war saxaafadeedka lagu sheegay in uu madaxwayne Farmaajo uu siagu qaatay go'aan shaqsiyadeed.
Madaxwayne Farmaajo ayaa 8 bishii Febraayo 2017 loo doortay madaxwaynaha Soomaaliya.
Maxaa lagu micneyn karaa talaabadan?
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in tallaabada uu madaxwaynaha qaaday ay tahay go'aan shaqsiyadeed.
"Waa go'aan shaqsi ah oo uu madaxwaynaha qaatay,markaan ku leeyahay go'aan shaqsi waa in aan u aragno in jinsiyada u celinayo si uu dadkiisa ugu khidmeeyo",ayuu yiri Mr Cabdinuur.
Madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa in muddo ah ku noolaa Mareykanka waxa uuna dalka sanadii 2010-kii ka noqday ra'sul wasaare.
Sharci yaqaanada iyo khubarada dhanka dublamnaasiyada ayaa tallaabada madaxwaynaha ku micneeyay mid geesinimo leh.
Abukati Zakariye Yuusuf oo ah sharci yaqaan ayaa qaba in tallaabada madaxwaynaha ay tahay mid muujinaysa in uu dalkiisa daacad u yahay .
"Waa muujin muujinaysa in uu daacad dhab ah u yahay wadankiisana si dhab ah ugu shaqeeyo inuu doonayo oo u muujinayo, " ayuu yiri.
Balse Abukati Zakariya ayaa sidoo kale qaba in laga yaabo in madaxwaynha culayso uga yimid haysashada labada jinsiyadood.
" Waxaa dhici karta in uu culaysyo uga yimid in labada jinsiyadod uusan ku wada shaqayn karin,waxaas waa saadaalin,balse isaga ayaa og sababta dhabta ah ee uu uga tanaasilay,balse waa go'aan geesinimo leh " ayuu intaa ku daray.
Waddo ku furanytay madaxda kale ee haysta labada jinsiyadood
Qaar badan oo ka mid madaxda dowladda Fedaraalka ayaa waxay haystaan dhalashooyiin dalal kale oo u badan kuwa reer galbeedka.
Qaar ka mid ah golaha wasiirada,xubnaha baarlamaanka iyo madax kale oo dowlada hadda jirta ka tirsan ayaa haysta dhalashada dalal kale oo ay horey ugu noolaayeen.
Su'aasha ay dad badan imika is waydiinayaan ayaa ah arrintan ma saamayn doontaa madaxda kale.
Abukate Zakariya ayaa sheegaya in dastuurka imika jira ee Soomaaliya uu dhigayo in qofka uu haysan karo labo jinsiyadood.
Waxa uu intaa ku daray in dalal badan oo ah kuwa caalamka islamarkana uu dastuurkoodu fasaxayo haysashada labo jinsiyadood,balse ay jiraan qodobo xaddidaya cidda qaban karta jagooyiinka muhimka ah " ayuu yir Mr Zakariye.
Image caption abukaate Zakariye
Abukate Zakariya aya qaba in la joogo xilligii xeer laga soo saari lahaa in dadka haysta labada dhalasho aysan qaban karin jagooyinka muhimka ah.
" Maadaama uu madaxwaynuhu go'aankaas qaatay geesinimada leh muujiyay wadaniyadiisa,muujiyay dadnima dal jaceylkiisa,waxan aniga fikiri lahaa in xeer iyo nidaam laga soo saaro oo waliba uu isaga madaxwaynaha u horeeyo " ayuu intaa ku daray.
Abukate Zakariya ayaa sheegaya in xilligan ay haboontahay in la helo shuruuc xaddidaysa dadka haysta labada dhalasho in jagooyiinka qaar aysan qaban karin.
" In la dhaho labo jinsiyadood qof haysta ma maamuli karo darajooyiinka intaas la eg ayaa aad u haboonaan lahayd wadamada oo dhan way qabaan" .
Tallaabadan taageerada Farmaajo sare ma u qaadi kartaa?
Tallaabada madaxwayne Farmaajo ayaa khubarada siyaasada u arkaan in laga yaabo inay sare u qaado shacbiyada uu ku leeyahay gudaha.
Abukaate Zakariye oo aan waydiinay in tallaabadan ay sare u qadai karto shacbiyad iyo kalsoonida shacabka,ayaa ku jawaabay, "haa doodi kama taagno,wuxuu muujiyay wadaniyad,daacadnimadiisa,wuxuu muujiyay dal jaceylkiis ayuu muujiyay haddii uu ka tanaasulay "